Baolina kitra - CAN 2019 :: Tafita amin’ny 1/4-dalana ny BAREA rehefa nandavo ny RD Congo • AoRaha
Baolina kitra – CAN 2019 Tafita amin’ny 1/4-dalana ny BAREA rehefa nandavo ny RD Congo
Mitohy ny lalana sy ny nofinofy tsara! Hatramin’ny segaondra farany sy ny daka farany ny fitaintainan’ireo Malagasy
an-tapitrisany, izay nanaraka ny lalao ampahavalon-dalan’ny Barea sy ny RD Congo, omaly alina. Tafita hiatrika ny dingan’
ny ampahefa-dalana, hihaona amin’izay mandresy amin’i Ghana sy Tonizia, i Madagasikara amin’izao fiadiana ny amboaran’i Afrika (CAN 2019) atao any Ejipta izao. Niondrika teo anatrehan’ny Malagasy tamin’ny alalan’ny « tirs au but », 4 noho 2, ny RDC.
Feno ny hafaliana nanerana an’i Madagasikara, hatrany Ejipta sy ireo firenen-kafa onenan’ireo mpiray tanindrazana noho ny fahombiazan’ny Barea indray tamin’ny dingan’ny ampahavalon-dalana, omaly, tany amin’ny kianjan’i Alexandrie (Ejipta). Nisaraka ady sahala 2 sy 2 tamin’ny RD Congo isika nandritra ny fe-potoana ara-dalàna niampy ny fanalavam-potoana, rehefa nitarika hatrany ry Faneva Ima tamin’ity lalao ity (1 – 0, 1 – 1, 2 – 1, 2 – 2).
Tifitra nisavoan-danitra indroa nataon’i Marcel Tisserand sy Yannick Bolasie tamin’ny fandakana penalty, no nampivoaka ho mpandresy ny Malagasy tamin’ny tsotsori-mamba nisarahana. Samy nahafaty ny anjarany kosa ry Ibrahim Amada, Romain Métanire, Thomas Fontaine ary Jerôme Mombris. Azo heverina ho tanteraka ny fampanantenan’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy. “Efa mivononona amin’ny tsy ampoizina izahay”, araka ny nambarany. Hita taratra izany teo amin’ny “Tirs au but” izay toa efa nomanina na dia nampitsanga-mitoetra ny mpanohana an’i Madagasikara aza.
Ny Malagasy hatrany no nitarika ny isa teo amin’ity fihaonana ity. Vao teo amin’ny minitra fahasivy dia nahatafiditra baolina i Ibrahim Amada, mpilalao tsy mbola nahita isa teo amin’ireo lalao telo efa vitan­tsika. Teo amin’ny minitra faha-21 anefa no nahavita nanasahala ny isa ny Kongoley tamin’ny alalan’ny lohan’i Cédric Bakambu, isan’ireo mpilalao andrin’ny RD Congo. Io isa io ihany koa no noentin’ny roa tonta niala sasatra.
Teo amin’ny fidirana faharoa dia mbola nitarika indray ny Barea, tamin’ny alalan’ny lohan’i Faneva Ima Andriantsima, teo amin’ny
minitra faha-77. Efa tany amin’ny segaondra farany tsy hiravana no voasahalan’ny mpifanandrina indray ny isa tamin’ny lohan’i Chancel Mbemba ka voatery niditra tamin’ny fanalavam-potoana ny roa tonta.
Isan’ireo mpilalao efa nandra­san’ny maro hamono baolina nanomboka tamin’ny fiandohan’izao fiadiana ny amboaran’i Madagasikara izao i Faneva Ima Andriantsima. Tamin’ity lalao nihao­nantsika tamin’ny RD Congo ity vao nahavaky atody ity kapitenin’ny Barean’i Madagasikara ity. Tolotra avy tany amin’i Romain Métanire no notsenain’i Faneva Ima tamin’ny lohany. Isan’ny hain’i Faneva tsara ny mampiasa an’io lohany io.
Tsy ampy fitoniana
Olana teo amin’ny fandraisana olona hatrany no nahafatesan’ny RD Congo ny baolina roa, nandritra ny fe-potoana ara-dalàna. Tsy voatanan’i Jerôme Mombris sy Thomas Fontaine i Cédric Bakambu tamin’ny tolotra lavitra nataon’ny irakiraka kongoley.
Toy izany ihany koa, tsy nisy naka i Chancel Mbemba, tamin’ny namonoany ny baolina faharoa ho an’ny Léopards-n’ny RD Congo.
Sarotra tamin’ireo mpilalao Malagasy ny nitana ny folo minitra farany tamin’ity fihaonantsika sy RD Congo ity. Efa tany amin’ny minitra farany vao nahafaty ny baolina faharoa nanasahalany ny isa ny RD Congo. Efa nahazo antsika tamin’ny lalao ara-pirahalahiana tamin’i Luxembourg ny tsy fahaizan’ireo mpilalao mitony amin’ny fitarihana ny isa. Efa tany amin’ny minitra fanampiny no nahafatesan’ireo mpilalao avy any Luxembourg ny baolina roa noentiny nanasahalana ny isa, rehefa avy nitarika tamin’ny isa 3 noho 0 ny Malagasy. Isan’ireo tokony nataon’ny mpanazatra tamin’ny faramparan’ny fotoana ny fanoloana mpilalao, izay mbola nanana anjara roa isika.
Hafaliana tsy roa aman-tany
Toy ny andro antoandro ny teny amin’ireo arabe rehetra teto Antananarivo sy ny manodidina, hatramin’ ny tany amin’ny faritra maro, taorian’ izao fandresena miezinezina azon’ny Barean’i Madagasikara teo amin’ny dingan’ny ampahavalon-dalan’ny CAN 2019 izao. Horakoraka sy kiakiaka miaraka amin’ireo feon’anjomara isan-karazany no nameno ny tanàna taorian’ity lalao ity.
Isan’ireny ny tetsy amin’ny Dôme RTA, izay niarahan’ireo mpiara-miasa sy ny vady aman-janany teo anivon’ireo vondron’
orinasa Prey, tantanan’i Edgard Razafindravahy. Fetim-pianakaviana no azo ilazana azy, taorian’ny fandre­sena miezinezina azon’ny Barea. Tsy ho latsa-danja ny amin’ny ampahefa-dalana.
Fifindrana mpilalao Hiverina hilalao ao amin’ny FC Lorient i Jeremy Morel
Baolina kitra – «CAN 2019» :: Feno fahavononana tanteraka ny Barea
Atletisma – Afrika faritra fahadimy :: Nijanona teo amin’ny laharana fahefatra Ilahivokatse